🥇 ▷ IPhoneka ayaa lumiyay wax ka dhigay runtii mid gaar ah suuqa! ✅
IPhoneka ayaa lumiyay wax ka dhigay runtii mid gaar ah suuqa!
Haddii aadan ogeyn, imaatinka iPhone 11, waxaan ku iri nabad galyo farsamo aad u xiiso badan. Taasoo xiisaha liidata ugu horreysay ee Apple ku soo bandhigtay iPhone 6S, ka dib in kabadan 5 sano oo horumar ah oo ka mid ah sheybaarada Cupertino.
Dabcan annaga ayaa ka hadlayna 3D taabasho, taas oo inkasta oo ay sameysay iPhone ka duwan wax kasta oo suuqa ka jira, waligeed muu ahayn muuqaal ogolaansho ah.
Waan soo dhaweyn karnaa iPhone 11… Laakiin waqti isku mid ah, waa inaan si wanaagsan uheelnaa 3D Touch!
Sidaa darteed, 3D Touch waa asalka aasaasiga ah dareemayaal adag oo gudaha shaashadda casriga ah, oo u adeega oo keliya oo lagu cabiro cadaadiska uu adeegsaduhu adeegsanayo marka la isku dayayo in wax laga dhex sameeyo gudaha nidaamka Nidaamka Howlgalka ee iOS.
Sidan, oo leh heerar cadaadis oo kala duwan, waxaa suurtagal ah in loo fidiyo isticmaaleyaasha gabi ahaanba xulashooyin kala duwan. Tusaale ahaan, adoo riixaya sumadda farriinta xoog xoog leh, isla markiiba waad dooran kartaa ikhtiyaarka ‘farriinta cusub’.
Waxa xiiso lihi leh, markii Apple u keento tikniyoolajiyad suuq inay keento… Inta badan xafiiltanku waxay isku dayaan inay wax uun nuqul ka sameeyaan! Laakiin 3D Touch shaki la’aan waxa ka reebban sharciga.
Hagaag, dad badan ayaa u malayn kara in tikniyoolajiyadda loosoo dejiyey qoorta. Laakiin sababtu maahan sidan! Kooxda ay xafiiltamaan ee Apple waxay kaliya soo gabagabeeyeen in shaqadu aysan faa’iido lahayn. Oo sida muuqata, madaxa iPhone laftiisa ayaa isla go’aankaas gaadhay 4 sano kadib markii la sii daayay.
Maaha in 3D Touch aysan qurux badnayn, maxaa yeelay runtii aad bay u xiiso u leedahay isticmaaleha. Runtu waxay tahay Apple waligey maan aqoon sida loo sameeyo teknolojiyada. Xaqiiqdii, inta badan milkiilayaasha iPhone malaha xitaa ma oga inay leeyihiin marin u gaar ah noocyadaan dareemayaasha ah oo ku dhegan shaashadda casriga ah.
Maaha in la sheego in dhammaan astaamaha tikniyoolajiyadda ay ku leedahay iPhone-ka si fudud loogu beddeli karo is-dhexgal kale. (Sida dhaadheer-dhejis ama To -chez-labo).